Soo dejisan Hearthstone 19.2.1.70828 – Windows – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Hearthstone
Hearthstone – ciyaar caan ku salaysan caalamka Warcraft ay dabeylaha Entertainment. Ciyaarta ayaa waxaa ku jira hababka ciyaarta kala duwan oo ay ka mid yihiin tababarka, saaxiibtinimo ee xafiiltanka, tartamada oo saaxada, iska hor imaad iyo ciyaaryahano kale oo dagaal madaxda. Ciyaartoyda Hearthstone Marba jilaan kaararka la sharraxaa ururiyey ee personage la soo xulay oo u isticmaali laabtaan kala duwan, kartida ama hub ah geesiyaal si loo gaadho guul. Ciyaarta ayaa waxaa ku jira kaararka dhif iyo awood leh oo loo heli karaa ee ka qayb tartamada iyo iyada oo iibka ah nooc oo kala duwan oo kaarar. Hearthstone sidoo kale awood u siisaa inuu disenchant kaararka la rabin loo helo ciidda sixirka kuwaas oo loo isticmaalo in la abuuro kaadhadhka cusub.
Xulashada badan oo personage
Fursadaha Wide ee habka ciyaareed
Hababka ciyaarta kala duwan
Soo dejisan Hearthstone
Isticmaalkani wuxuu u baahan yahay Battle.net si habboon u shaqeeya
Faallo ku saabsan Hearthstone
Hearthstone Xirfadaha la xiriira
IMVU – aalad lagu wada xiriiro adduunka 3D casriga ah. Software-ka wuxuu adeegsadaa jilayaasha 3D si ay ula bartaan dadka isticmaala.